I-china i-cypb yokulinganisa idiskhi yokuhambisa ukutya kunye nefektri | Izixhobo zoLungiso lweChengxin
I-cypb yecomputer yediski eyondlayo luhlobo lwezixhobo zokondla ngevolumetric ngokutya okuqhubekayo. Ifakelwe ekothulweni kwezixhobo zokugcina ezinjengeesilo, isililo kunye nomgqomo webhakethi.
I-cypb yecomputer yediski eyondlayo luhlobo lwezixhobo zokondla ngevolumetric ngokutya okuqhubekayo. Ifakelwe ekothulweni kwezixhobo zokugcina ezinjengeesilo, isililo kunye nomgqomo webhakethi. Kunyanzelwa yindlela yokusebenza ye-disc feeder phantsi kobunzima bempahla, kwaye ifakwa kwisixhobo esilandelayo ngokuqhubekayo nangokulinganayo. Xa iyeka ukusebenza, inokudlala indima yokutshixa umgqomo. Yinkqubo eqhubekayo yokuvelisa izixhobo eziphambili.
ICypB uthotho lwediski eyondlayo luhlobo olutsha lwe-disc feeder enokuthenjwa okuphezulu, ukusebenza okuphezulu kunye nokonga umbane, eyilelwe kwaye yenziwa yinkampani yethu kwisiseko sokugaya kunye nokufunxa itekhnoloji yamanye amazwe kunye nokudibanisa imeko eyiyo e-China. Iqhubele phambili ngakumbi kwaye inengqiqo kulwakhiwo. Inempawu ezilandelayo:
1. Izixhobo zamkela ubume benkxaso enkulu ejikelezayo, enomthamo omkhulu wokusebenza kunye nokusebenza okuzinzileyo.
2. Inkqubo yokuhambisa yamkela ukuhanjiswa kwamazinyo anzima kumazinyo, anokusebenza okuphezulu kokuhambisa kunye nobomi benkonzo ende. Isinciphisi kunye neemoto zifakelwe phantsi komphezulu wediski, kwaye sonke isixhobo solwakhiwo sihlangene.
3. Izixhobo zamkela ulwakhiwo lokutywina olukhethekileyo, iinxalenye zothumelo zithanjisiwe kwaye zatywinwa, kwaye akukho miba yamanye amazwe ingena kwiindawo zokuthambisa, ukuze kuqinisekiswe ukuba isixhobo sinokusebenza ngaphandle kwesiphoso.
4. Isantya sokuguqula isantya sokuguqula sisebenzisa imo yolawulo lokuguqula ubungakanani bevektri, ene-torque enkulu yokuqhuba, uhlengahlengiso olubanzi kunye nokuchaneka kolawulo oluphezulu.
5. Isakhiwo esivalelwe ngokupheleleyo samkelwa kwinkqubo yokuhambisa izinto, efanelekileyo kucoceko kwisiza kwaye idala imeko yokusebenza encomekayo.
6. Isakhiwo seemodyuli kunye nokuchithwa kwamkelwa izixhobo zomzimba kunye nomkhono ongenanto ukuze kuqinisekiswe ukukhutshwa ngokukhawuleza kunye nokudibanisa kwisiza. Indawo yokubeka indawo yokuphuma inokuchongwa ngokuthanda ngaphakathi kweedigri ezili-180, nto leyo eyenza kube lula ukuyisebenzisa.
Idiskhi yediski yokusebenza Iziphumo t / h Ukwahlulahlula ububanzi bebhendi
CYPBφ1600 10 ～ 100 R650
CYPBφ2000 20 ukuya kuma-200 Iiyure ezingama-800
CYPBφ2200 25 ukuya kuma-250 Iiyure ezingama-800
CYPBφ2500 30 - 300 ≤1000
CYPBφ2800 40 ukuya ku-400 ≤1200
CYPBφ3000 50 ukuya kuma-500 ≤1200
CYPBφ3200 60- 600 ≤1500
CYPBφ3600 90 ukuya ku-900 1600
Egqithileyo Belt, feeder chain
Okulandelayo: I-czg kabini ubunzima be-feeder
Isondli seDiski esivaliweyo
UMvelisi weDiski uMvelisi
Ixabiso lesondli seDiski
Ubungakanani beDisk feeder
Nkqo Disc feeder
Belt, feeder chain